Bobabini bafune ukuzinza kokuzibophezela
I-Cancer neVirgo iqala ngenyawo olungileyo, ekubeni zombini igcinwe, kwaye ayizami ukunyanzelisa uthando kwenye. Iingxoxo zabo zingabonakala zigugile kwiintlobo ezingapheliyo, neentlonipho ezihloniphekileyo eziboniswe kumacala amabini.
Izinto zihlaselwa xa zizama ukufanisa intambo ethandwayo yokubheka. Baya kwenza njengokuba kulungile ukuba "ngabahlobo kunye neenzuzo," kodwa bobabini bafuna ukuzinza kokuzibophezela, nangona bangesaba, nabo.
Banobubele, kulula ukuba ngamnye azive ephezulu kweentloko zawo. Basabela ngokungahambi kakuhle kwaye babuyele. Omnye unako ukutolika oku njengentsikelelo. Isiluleko kukuthatha izinto ngokukhawuleza, ukuvumela ixesha elaneleyo lokucwangcisa okwenzekayo.
Iintsholongwane zothando zithandana , zithandana , kwaye ngamanye amaxesha, zikhuselekile.
Iilgijoni othandweni zicatshangelwa kwaye zibonisa umgangatho ophezulu kunye nemigangatho ephakamileyo.
I-Cancer iyayiqonda indlela iVirgo eqwalasela ngayo izinto ezithandayo kwaye uzama ukufumana iingcamango ezikhethwe kakuhle. UVirgo uzizwa efunekayo ngokukhawuleza, ekubona ukuba ingakanani iCarcer ingasebenzisa uncedo kwimiba ethile. I-Virgo inokuzama ukulungelelanisa umdlavuza kwi-go-go, eyona nto ibonisa umdla. I-Cancer iya kuqonda ukuba yiziko lelo hlobo, ngaphandle kokuba lihamba kakhulu. I-Virgo ingenza kakuhle ukuphanda indlela efanelekileyo yokufumana umhla weCarcer ukuze uzive ulungele kwaye uqhube kakuhle.
Olu phawu luzisa iinkonzo ezimbini kunye, kodwa njengethimba, zinokuzifihla zonke iziseko. Ngamnye uya kuthuthuzelwa yilo lonke ucwangciso oluya kumhla, kwaye kamva, ukucwangciswa kwangaphambili kwezinto zonke kunceda ukunciphisa ukwesaba okwabelwana ngawo.
Igama elibalulekileyo ukhuseleko, kuba sele bekunayo, umdlavuza kunye neVirgo ziyakwazi ukuzimela.
Ukuba abangenayo, zombini unokuba yiimeko zebhaskiti ezingenanto. Ukuba bayaphumelela ekudaleni isiseko sethemba, ubudlelwane bunzulu bunzulu kwaye ezinye iindawo zibonakala. I-Cancer neVirgo bayayithanda indlela yokuphila, kunye nesithembiso sithuba esiningi sokusebenza iikinks kwaye sikhule ngakumbi.
I-Virgo yintliziyo-mcinge kunye neCarcer ngumva, kwaye ngamanye amaxesha oku kungakhokelela ekungaqondani. Ngaphandle kokuyiqonda, iVirgo inokukhubekisa umdlavuza ngokuthetha ngezinto ngendlela engafanelekanga. Kwiphepha le-flip, iVirgo ingayifumana ukunyaniseka kwenyanga ngokukhawuleza ukuthanda umyalelo. Lo mahluko ungaguquka njengesipho xa, nge-osmosis, i-Cancer ifumana imbonakalo efunekayo kakhulu, kwaye iVirgo ikhula ngokuqonda imiqobo.
Ebudlelwaneni, umdlalo weCancer-Virgo unokuba nothando, ukuziphatha, nokuzinikela. I-Cancer ixabisa ukunyaniseka kukaVirgo, kwaye uzama nzima ukuyibonisa ngokunyusa imihla ngemihla. I-Virgo iqala ukuziva ikhuselekile emoyeni okhathalelayo owenziwe phakathi kwabo. Ulwalamano lunokuba linye ithuba lokukholisana, kunye ne-Virgo ingqwalasela ngokucacileyo iinkcukacha kunye nesimo sengqondo somhlaza weCarcer. Oku kubambisana ngumtshato, kwaye emva kokuzibophezela kwenziwa, kuya kuba yinto ebomini.
Ngaphandle: Ukuzinikela ngokubambisana, ukuqonda ngokwaneleyo kwezidingo, ukukwazi ukuqinisekiswa komnye, uthando olufanayo lokucwangcisa izinto ezifana nokuhamba, ukwabelana ngokuthanda ukuqhelanisa nokuqhelekileyo, ukuzonwabisa okwabelwana ngayo ngokukhulisa abantwana kunye nabahlobo bezilwanyana.
Ngaphantsi: Uxinzelelo lwangxobhisa ukutyalwa kwezinto zombini, iimoya zithintela iimvakalelo, ukungakhuselekanga kunokuphazamiseka, i-hypochondria, ukunyaniseka kwimikhwa yokugxeka. Qaphela xa ubona:
Ikhadi leManzi (iCcercer) kunye ne- Mutable ( ichitshiyelwe ) Umhlaba (i-oriented-oriented) (Virgo)
Intsholongwane yeCancer and Virgo Love Story
NdingumVirgo. Ukuphuma kwam kwakuyiK cancer. Sonke sasigcinwe kangangokuba okokuqala kwakuqala ukuqala. Ndandiziva ndiyimfuneko kwaye ndazama ukukunceda ukuba ndiyithembele. Wayenenkxalabo malunga nayo yonke into. Ndinguye owazama ukufumana izicombululo, kodwa akazange akhonze kwaye akazange aqonde oko ndenzile. Saye sithethe kakhulu ngezinto ezifanayo ngokugqithiseleyo. Wayekhetha ukuphepha ukuxoxa ngezinto kunokuxazulula imiba, ngoko ke sasinamathela kwiingxoxo ezifanayo. Nangona kunjalo, nangemva kokuba sele ndibandakanyekile, umdlavuza wam ushiye. Konke kuzo zonke, kwaphela iminyaka emibini kwaye yaphela ngenxa yokuba umdlavuza wawungakulungele ukuzinikela emva kwayo yonke into.
UVenus Scorpio Uthando olufanelekileyo
"Bonke Abantwana Bam": Abalingani Abakhulu